Simplest Way To Regain Gmail Storage Space | TechSectors
Simplest Way To Regain Gmail Storage Space
ဒီအကြောင်းက အရင် ဖိုရမ်မှာရေးခဲ့ဖူးတဲ့ Did u need extra space in Gmail ?? နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ် - မိသားစုဝင် တော်တော်များများက Gmail အသုံးများကြတာမို့လို့ ဒါကိုပဲ အလေးထားပြီး ရေးဖြစ်တာပါ - Gmail acc တစ်ခုတည်းကိုပဲ အရောရော အနှောနှော သုံးလေ့ရှိတဲ့သူ - သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများတဲ့သူ - ဝင်ဖြစ်တဲ့ Websites တိုင်းမျာ acc လုပ်ရင် တစ်ခုတည်းသော Gmail ကိုသာ အမြဲပေးလေ့ရှိသူ - စာဝင်စာထွက် ပုံမှန် စစ်ဆေးလေ့ မရှိသူ - ဝင်သမျှစာကို ပုံမှန် စစ်ဆေး ဖျက်ဆီးလေ့ မရှိသူတွေ ဆိုတာ Gmail ကနေ ပေးထားတဲ့ Storage limit ကျော်အောင် သုံးနိုင်မယ့် သူတွေပါပဲ -
Photo from ebooksmith.com
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုခုနဲ့ ကိုက်နေလို့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Gmail acc ရဲ့ Mail box ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စာတွေက storage limit ကို ကျော်လွန်ပြီး နောက်ထပ် ကိုယ့်ဆီရောက်လာမယ့် စာတွေက မလာတော့ဘူး - ကိုယ့်ဆီ တစ်ယောက်ယောက် က စာတစ်စောင် ပို့လိုက်ရင် ကိုယ့်ဆီ မရောက်ပဲ ပို့တဲ့ သူဆီပဲ ပြန်ပို့ခံရနေပြီ - စသဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ဆီ နောက်ထပ် ရောက်လာမယ့် စာတွေကို လက်ခံနိုင်ဖို့ အသုံးလိုတဲ့ စာတွေရော မလိုတာတွေရော ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဒီ Mail box ထဲက စာတွေကို တစ်ခုချင်းစီ လိုက်စစ်ပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ဖို့ကျတော့လည်း အချိန်က မပေးနိုင်တော့ဘူး - ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ??
Google က ပြောထားသလို Gmail Inbox အတွက် Extra storage space ထပ်ဝယ်ချင်ပါသလား - Google က Offer ထားတဲ့ တန်ဖိုးက သူပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆို တန်ဖိုး သိပ်မကြီးလှပေမယ့် ငွေကြေးတန်ဖိုး စီစစ်သုံးစွဲ ချင်သူတွေ အတွက် ကျော်လွန်သွားတဲ့ ကိုယ့် Gmail ရဲ့ storage space ကို တစ်ခြားနည်းလမ်း တစ်ခုနဲ့လည်း အလျင်မြန်ဆုံး ပြန်လည် ရယူ နိုင်ပါသေးတယ် - အဲတာကတော့ ကိုယ့် Mail box ထဲက ပမာဏ အများဆုံး ( ဝါ ) attachments အကြီးဆုံး ပါတဲ့ Mails တွေကို စီစစ်ရွေးထုတ်ပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပါ -
ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းက အပြောလွယ်ပေမယ့် Gmail acc ထဲဝင်ပြီး ထောင်သောင်းချီနေတဲ့ Mails တွေရဲ့ ကြားမှာ စာတစ်စောင်ချင်းစီ ဘယ်ကောင်က ပမာဏ အများဆုံး ( ဝါ ) attachments အကြီးဆုံး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ရှာဖွေဖို့ ကျတော့ ခက်ပါတယ် - နောက်တစ်ခု ရှိသေးတာက Gmail မှာ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ Email messages တွေကို အရွယ်အစားကိုလိုက် ပြီး ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စဉ်ပေးနိုင်တဲ့ feature မျိုး မရှိသေးပါဘူး - တကယ်လို့ အဲလို အရွယ်အစားလိုက် စီချင်တယ် ဆိုရင် Gmail ထဲမှာ မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား Email clients မျိုးတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့တော့ ရပါတယ် - ဒါပေမယ့် ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်နည်းမျိုးက အဆင့်လည်း များသလို Email clients တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သုံးလေ့သုံးထ မရှိသူတစ်ယောက်အတွက် အခက်အခဲ ရှိမှာ အမှန်ပါပဲ - အဲ့လို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲကြန့်ကြာမယ့် အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ပေးမယ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရပ် ခုချိန်မှာ ရှိနေပါပြီ -
Gmail Messages များအား အရွယ်အစားလိုက် ခန့်ခွဲခြင်း
ဘယ်နည်းတွေ ဘယ်လောက် ခက်ခက် - ဦးနှောက်ခြောက် ခေါင်းစားစရာ မလိုပဲ အားလုံးထက် လွယ်ကူ လျင်မြန်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ် - အဲတာကတော့ Download လည်း ချစရာမလို - Install လည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ မလိုတဲ့ Findbigmail ကို အသုံးပြုဖို့ပါ -
ရှုပ်တီးရှုပ်ရှက် မနိုင်တဲ့ Findbigmail ဟာ လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း သူ့ Site ရဲ့ မျက်နှာစာမှာ တစ်ဆင့်ချင်း ဖော်ပြပေး ထားပါသေးတယ် - သူ့စာမျက်နှာကို သွားရင် တွေ့ရမယ့် Email address နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Storage space ပြည့်နေတဲ့ /ပြည့်လုနီး Email address ကို ထည့်ပေးပြီး အဆင့်လိုက် ဆက်လုပ်သွားရင် သူကနေပြီး ကိုယ့် Gmail acc ထဲက ပမာဏ အကြီးဆုံး Email messages တွေကို ရှာဖွေပေးပါလိမ့်မယ် - နောက် ကိုယ့်ရဲ့ Gmail acc ထဲမှာ FindBigMail ဆိုတဲ့ Labels နဲ့ ပမာဏအများဆုံး Emails တွေကို အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ခွဲခြားဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် - အဲ့ဒီ့ သူဖော်ပြထားတဲ့ ပမာဏ အများဆုံး Emails တွေကို စစ်ဆေးပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်အတွက် အရေးတကြီး လိုနေတဲ့ Storage space ကို ပြန်လည် ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် -
ကိုယ့် Mail box ကို Scan ဖတ်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြာမြင့်ချိန်ခြင်း မတူညီနိုင်ပါဘူး - စာအရေအတွက် ပမာဏ များရင် များသလို ကြာမြင့်ချိန် ကွာခြားနိုင်ပါတယ် - အဲ့အတွက်လည်း ပူစရာ မရှိပါဘူး - သူက Scan အားလုံးပြီးလို့ Result ထွက်ရင် Mail ပို့ အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ် - သူပို့လာတဲ့ Mail မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ကိုယ့် Inbox ထဲက Mails အားလုံးရဲ့ အခြေအနေကိုပါ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် -
ဒီ့ထက်မက အသေးစိတ်ချင်လို့ရှိရင် Google ကနေ အတည်ပြုထားတဲ့ Advanced search operators တွေနဲ့ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမလိုဆုံး Emails တွေကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ် - ဒီအကြောင်းကိုတော့ Did u need extra space in Gmail ?? မှာ အထိုက်လျောက် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီမို့ ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး -
နောက်တစ်ခု ရှိသေးတာက Security ပိုင်းကို အလေးထားသူတွေ အတွက် Findbigmail ဟာ Grant access ပေးရတယ် ဆိုပေမယ့် Big Mail ဟာ IMAP ကနေ တစ်ဆင့် Gmail account ထဲက Emails အားလုံးရဲ့ အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံကို ယူငင် စစ်ဆေးတာမျိုး မဟုတ်ပဲ Sizes တစ်ခုကိုပဲ စစ်ဆေးတာမျိုးမို့လို့ Security ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အားသာချက် ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် - ဒါ့ကြောင့် Gmail မှာ အရေးပေါ် Storage space လိုသူများ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်ပါတယ် -
မိသားစု အားလုံး လေ့လာနိုင်သမျှ မျှဝေနိုင်ကြပါစေ -
Get Movies From Mediafire Links
Alternative DNS Servers You Should use
Free Online HTML Editors With Instant Previews
Getting started with Google Toolbar
Gmail Desktop Clients For Everyone
How To Remove Your Web History From Google Servers ?
VPN Services Protect Your Privacy And Security
Orta GTK Theme Looks Great on Ubuntu
How To Embed Youtube Playlists
Google intros Instant Preview in search
5 Simple Ways to Keep Your Eyes
Gmail Gets5New Themes
Which of these is notaweb browser ??
Useful Tips For Youtube Lovers